Failures…"Aug 30, 2013M.N commented on Sean Lin's group Google Android"ဒါကတော့ final result ပါ။
"Aug 30, 2013M.N commented on Sean Lin's group Google Android"၁။ Android Virtual Device တစ်ခု ကို အောက်ကပုံစံအတိုင်း create လုပ်ပါ။ Android 2.2 နဲ့ ARM processor ကို သုံးထားပါတယ်။
၂။ Android superuser.apk နဲ့ su ကို ဒီမှာ download လုပ်ပြီး zip ဖြည်ပါ။ ARM devices (2.0 – 4.1) အောက်က …"Aug 30, 2013M.N commented on Sean Lin's group Google Android"Android application ဘယ်လိုစရေးမလဲ။
ထုံးစံအတိုင်း Hello World ကပဲစရေးပါလို့ အကြံပေးချင်ပါတယ်။ IDE(Integrated Development Environment) အတွက် Eclipse ကို download မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင် Adnroid developer website ကနေ download လုပ်ရပါမယ်။ အခုဆိုရင်…"Aug 24, 2013M.N commented on Sean Lin's group Google Android"သိသလောက်ဖြေကြည့်မယ်လေ။ Android က Emulator ဖြစ်ဖြစ် real device ဖြစ်ဖြစ် root လုပ်ပြီးမှ font install လုပ်လို့ရတယ်။ ကိုယ် install လုပ်မဲ့ font ကိ်ု .ttf အနေနဲ့ download လုပ်ပြီး DroidSansFallback.ttf လို့ အမည်ပြောင်းပြီး root လုပ်ထားတဲ့ android ရဲ့…"Aug 24, 2013M.N replied to Aung Zin Than's discussion သိရင် ပြောဆိုဆွေးနွေးပေးကြပါခင်ဗျာ။"စလုံး လာမယ်ဆိုရင်တော့ မျိုးကြီး သီချင်းပြေး သတိရတယ်။ (p.s. just kidding! no offence. :P)"Mar 27, 2013Aung Ht replied to M.N's discussion Netwroking သမား တွေရဲ့ နေ့စဉ်တာဝန် တွေကို share ပေးကြပါဦး။"ကျန်တော်လည်း IT နဲ့ စလုံး မှာတင် ၂နှစ်လောက်ရှိတော့မယ်. ... အခုထိ အလုပ်ကို technical ပိုင်းအားမရသေးဘူး...